ကျွန်ုပ်တို့၏ 2022 Forex Trading PDF ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ - ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 2022 Forex Trading PDF ကို Download လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 17 ဇန်နဝါရီလ 2022
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex trading PDF ကို Forex သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော (သို့မဟုတ်အရည်) ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယုံကြည်ထားကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ FX ဟုရည်ညွှန်းပြီးငွေကြေးကိုတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ - တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ရောင်းသည်။
Forex ဟူသောဝေါဟာရသည် 'နိုင်ငံခြားသုံးငွေ' နှင့် 'ငွေကြေး' ၏ရောနှောမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ ငွေကြေးတစ်ခုအားအခြားတစ်ခုသို့လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၎င်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အခြားအကြောင်းရင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဤသည်၌ Forex ကုန်သွယ်မှု PDF Forex trading က ဘာလဲဆိုတာနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ အသုံးများတဲ့ အသုံးအနှုန်းအချို့အကြောင်း ဆွေးနွေးပါမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရရှိနိုင်သော မတူညီသော Forex ဇယားများကို စူးစမ်းလေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော Forex ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးမည့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြံဉာဏ်အချို့ကို ချပေးထားပါသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံခန့် Forex နယ်ပယ်တွင်နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးသောကြောင့်ဤအထူးငွေကြေးဘဏ္instrumentာရေးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
အမှန်ကတော့, ဒါကနိုင်ငံခြားငွေရောင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူမှု၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအရာတွေကိုအမြတ်အစွန်း၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းစတဲ့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဏ်တွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအသုံးပြုကြတာ။
ဤနေရာတွင်စာတန်း (Gamuchirai Masiyiwa, GPJ Zimbabwe)
Forex trading နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာကုန်သည်များအနေဖြင့်ရာထူးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးသည့်နောက်တွင်အမြတ်အစွန်း (အမြတ်အဆင့်) ကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်နိုင်သည့်အနေအထားကိုထားရှိနိုင်ခြင်း (ကုန်သွယ်မှုပိတ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။
Forex စျေးကွက်သည်တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်အားဖြင့်တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံငွေကြေးအမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကိုတစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းလဲသွားပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိငွေကြေးအတွဲ ၂၄/၇ ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကုန်သွယ်နေပါသည်။
နိုင်ငံခြားငွေကြေးနှစ်ခုကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရောင်းဝယ်ဖောက်သည်တိုင်းအချိန်ဇုန်နှင့်မတူပဲ Forex စျေးကွက်တည်ရှိကြောင်းသင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ forex trading PDF အပိုင်းတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးများသော forex trading terminologies အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားပါမည်။
Pip သည် 'ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်း' ကိုဆိုလိုသည်။ Forex market အတွင်းရှိငွေကြေးအတွဲများတွင်မှတ်သားထားသည့်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ကိုဖော်ပြသည်။ ပိုက်သည်ငွေကြေးကိုးကားနိုင်သည့်အနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၀.0.0001 သည်စျေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းကိုအတွဲ၏အခြေခံယူနစ်ဟုရည်ညွှန်းသည်။
GBP / USD အတွဲအတွက်လေလံဈေးသည် ၁.၂၅၉၀ မှ ၁.၂၅၉၁ သို့ပြောင်းလဲသွားပါက၎င်းသည် pip တစ်ခု၏ခြားနားချက်ကိုဖော်ပြသည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ငွေကြေးအတွဲ၏ ၀ ယ်ယူမှုတို့၏ကွာခြားချက်ကို“ သိ” ဖြစ်သည် ပျံ့နှံ့. အနည်းဆုံးလူသိများသော (အနည်းဆုံးအသုံးများသော) ငွေကြေးအတွဲများမှာများသောအားဖြင့်ပျံ့နှံ့မှုနည်းသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းသည်ပိုက်တစ်ခုထက်ပင်နည်းနိုင်သည်။
အသုံးအများဆုံးငွေကြေးအတွဲများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်ပျံ့နှံ့မှုသည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ငွေလဲနှုန်း၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် Forex ကုန်သွယ်မှုအမြတ်အစွန်းဖြစ်လာစေရန်အတွက်ပြန့်ပွားခြင်းထက်ကျော်လွန်ရန်လိုအပ်သည်။
Forex trading PDF ကိုသြဇာသက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲမဖန်တီးနိုင်ပါ။ Forex ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များရရှိနိုင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အရင်းအနှီးကိုသြဇာသက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်သြဇာ သုံး၍ ကုန်သွယ်မှုမပြုမီ, သင်သည် Forex ပွဲစားသို့စာရင်းသွင်းပြီး margin အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရမည်။ ပွဲစားနှင့်အနေအထားအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ သင်သည်လက်လီဝယ်ယူသူ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သောကုန်သည်) ဖြစ်လျှင်သြဇာညောင်းသည်ကို ၁း၃၀ တွင်ဖော်ပြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောကန့်သတ်ချက်များကိုရှာဖွေလိုပါကအချို့သောကမ်းလွန် Forex ပွဲစားများကဤထက်များစွာများစွာကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
သင်ဟာ ၁.၁၇၀၀ ဒေါ်လာကျသင့်တဲ့ EUR / GBP ကိုရောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါစို့
သင်တစ် ဦး ဝယ်အနေအထားကိုရိုက်ထည့်စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်
သင်၏ forex trading account တွင်သင့်တွင်£ 500 သာရှိသည်
သင်ပိုမိုကုန်သွယ်လိုသည်၊ ထို့ကြောင့် 20x ၏သြဇာကိုသင်အသုံးပြုသည်
EUR / GBP ၏တန်ဖိုးသည် ၂% တိုးလာသည်။
ပုံမှန်ပေါင် ၅၀၀ ရှိသည့်အစုရှယ်ယာတွင်သင်အမြတ် ၁၀ ပေါင်ရလိမ့်မည်
ဒါပေမယ့် 20x leverage ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့ပေါင် ၂၀၀ အထိတိုးလာတယ်
သို့သော်ထိုစုံတွဲ၏တန်ဖိုးသွားလျှင် ဆင်း 2% အရ, သင်£ 200 ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။
အထက်ပါဥပမာကြောင့်သင်သြဇာကိုသုံးသောအခါသတိထားသင့်သည်။ အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြစ်ရပ်နှင့်သင်၏အကောင့် ၀.၀ အောက်သို့ရောက်သွားပါကသင်၏ Forex ပွဲစားကိုဆက်သွယ်ပြီး ၄ င်း၏အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်ငွေကာကွယ်ရေးမူဝါဒကိုတောင်းဆိုသင့်သည်။
သတင်းကောင်းမှာ ESMA (European Securities and Markets Authority) မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော Forex ပွဲစားများသည်သင့်အားဤအပိုအကာအကွယ်ပေးမှုကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးသင်၏ပွဲစားနှင့်အကြွေးမတင်ရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်သင့်အား0အောက်သို့မကျစေရန်တားဆီးပေးသောအဆို့နှင့်တူသည်။
မာဂျင်သည်ကုန်သည်များအတွက်သူတို့၏ထိတွေ့မှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုပထမ ဦး စွာတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ငွေပေးငွေယူကုန်ကျမည့်အစားငွေပမာဏကိုလုံခြုံရေးသိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုပွဲစားများကပွင့်လင်းသော Forex Trade တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Forex ပွဲစားများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားငှားရမ်းအသုံးပြုခွင့်ကိုပေးလေ့ရှိသည် (အထက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရသော်လက်လီရောင်းဝယ်သူကုန်သည်များအနေဖြင့်ပမာဏများများရောင်းဝယ်နိုင်သည့်အတွက်လုံလောက်သောပမာဏမရှိသောကြောင့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်လုံလောက်သည်။
သင်၏ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပြီးသင်၏လက်ကျန်ငွေကိုလျှော့ချရန်အတွက်သင်ခြံစည်းရိုးကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ ဤသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကုန်သည်များဘဏ္financialာရေးတူရိယာရောင်းခြင်းနှင့်ဝယ်ယူပါဝငျသညျ။ ငွေကြေးလည်ပတ်မှုများရှိပါက hedging မဟာဗျူဟာသည်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုကာကွယ်ခြင်းသည်မကြာခဏကာလတိုဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။
ငွေကြေးစျေးကွက်တွင်မတည်ငြိမ်မှုကိုသတင်းပို့သောဘဏ္mediaာရေးမီဒီယာကြောင့်ကုန်သည်များသည်မကြာခဏထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပထဝီနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုများ (အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှပconflictိပက္ခ)၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း (COVID-19) နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ကြီးမားသောဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းများကဲ့သို့ကြီးမားသောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည်။
အနုတ်လက္ခဏာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုတန်ပြန်ရန်အတွက်စျေးကွက်ကစားသမားများသည်စျေးကွက်အတွင်းရရှိနိုင်သောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုနည်းဗျူဟာအရအသုံးချလိမ့်မည်။ ဤသည်က၎င်း၏ truest ပုံစံအတွက်အန္တရာယ်ဆန့်ကျင်စောငျ့ရှောကျနေသည်။ သင့်ရဲ့ Forex trading အတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ဖို့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ Hedging ကသင့်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာဆုံးရှုံးမှုတွေဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်တွေကိုလုံးလုံးလျားလျားအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မယ်လို့အာမခံချက်မရှိသေးပါဘူး။
သက်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ခြားနားသောအနေအထားကိုဖွင့်သည်။
နောက်ထပ်ရှင်းပြဖို့, သင် GBP / USD ကိုအပေါ်ရှည်လျားသောအနေအထားရှိသည်ဆိုပါစို့
GBP / GEURBP တွင်နေရာတိုတစ်ခုကိုဖွင့်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Forex စျေးကွက်များသို့ ဦး တည်သွားရန်အချိန်ယူနိုင်သော်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောတရားကရလဒ်နှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစျေးကွက်များမည်သို့ရွေ့လျားသွားသည်ဖြစ်စေ၊ အချို့သောကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များ၌သင်သည်ချိုးဖောက်မှုအဆင့်တွင်ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်။
နိုင်ငံခြားသုံးငွေလဲလှယ်နှုန်းကို 'spot' လဲလှယ်မှုနှုန်းအဖြစ်မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်, spot spot သည်ငွေကြေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေး ၀ ယ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ အမှန်ကတော့, Forex Forex နိုင်ငံခြားငွေရောင်းခြင်းနှင့်ဝယ်နှစ် ဦး စလုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာအနေနှင့်သင်သည်တောင်အာဖရိကရန်းဒင် (ZAR) အချို့ကိုဝယ်ယူပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (USD) နှင့်လဲလှယ်လျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ZAR တန်ဖိုးတိုးလာပါကသင်၏ USD ကို ZAR သို့ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်မူလပေးဆောင်ခဲ့သည့်ပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်ပိုမိုငွေပြန်ရလိမ့်မည်။
CFD သည်အခြေခံအားဖြင့်ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများ၏ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ပြသောစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမလိုအပ်ဘဲကြီးမားသောငွေကြေးပမာဏကိုရောင်းချရန် (သို့) ဝယ်ရန်မလိုအပ်သည့်အပြင်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအများစုကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
CFDs များကိုငွေချေးစာချုပ်များ၊ ကုန်စည်များ၊ cryptocurrencies၊ CFD ဖြင့်သင်သည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုကုန်သွယ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံး ၀ ၀ ယ်ရန်မလိုတော့ပေ။
ကွဲပြားခြားနားသော Forex ဇယား
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Trading PDF ၏ဤအပိုင်းသည် forex ဇယားများအကြောင်းဖြစ်သည်။ MetaTrader platform သို့ရောက်သောအခါကုန်သည်များသည် bar charts, line charts နှင့် candlestick charts များကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောဇယားများအကြားလွယ်ကူစွာပြောင်းနိုင်သည်။
ယခုထင်ရှားသောမီးခွက်ဇယား၏ပထမဆုံးမှတ်တမ်းကို ၁၇၀၀ ပြည့်နှစ်များကဂျပန်၌အသုံးပြုခဲ့ပြီးဆန်ကုန်သည်များအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသက်သေပြခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဤစျေးနှုန်းဇယားသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိကုန်သည်များအကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။
OHLC ဘားဇယားကဲ့သို့ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) မီးခုံဇယားများသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွက်အနိမ့်အမြင့်၊ ပွင့်လင်း။ အနီးကပ်တန်ဖိုးများကိုပေးသည်။ တိုက်ရိုက် Forex ကုန်သည်များသည်၎င်းဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤဇယားကိုနှစ်သက်ကြသည် စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု အသုံးပြုထားသောပုံစံများ။
သင်ဟာအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်မဟုတ်လျှင်အခမဲ့ demo trading mode ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးသည်။ ဤသည်ကသင်စျေးကွက်တွင်ကြီးမားသောဘဏ္risksာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များမဖြစ်ပွားမီတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
'Open, High, Low, Close' ကိုကိုယ်စားပြုသည် OHLC ဇယားသည်တိကျသောအချိန် (ဥပမာ - တစ်နာရီသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးနေ့) တွင်လုပ်ဆောင်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ဈေးနှုန်းတွင်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုမဆိုဖော်ပြရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ခေါင်းစဉ်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ဘားဇယားဖြစ်သည်၊ ကုန်သည်တစ် ဦး ကြည့်နေသောအချိန်ကာလတစ်ခုစီတိုင်းကိုဘားအဖြစ်ပြလိမ့်မည်။ တစ်နည်းပြောရရင်နေ့စဉ်ဇယားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့နေ့တိုင်းဟာဘားတိုင်းနဲ့ညီမျှတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
လိုင်းဇယားနှင့်မတူဘဲ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) OHLC ဘားဇယားသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတန်ဖိုးများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပွင့်လင်း၊ 'မြင့်'၊ 'အနိမ့်' နှင့် 'အနီးကပ်' တို့ကိုပြသသောကြောင့်ထူးခြားသည်။
ညာဘက်ရှိ dash သည်ပိတ်သောစျေးကိုကိုယ်စားပြုပြီးဘယ်ဘက်ရှိ dash သည်အဖွင့်စျေးနှုန်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အစိမ်းရောင်ဘားများကို ၀ ယ်သူအရက်ဆိုင်များဟုလည်းခေါ်သည်။ အထက်ဆန့်ကျင်ဘက် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဖွင့်ဈေးသည်ပိတ်ပွဲထက်နိမ့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
OHLC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးမီးခွက်ဇယားများကိုရေးဆွဲရန်အတွက်အစပြုခဲ့သည် (ထပ်မံဖြည့်စွက်ပါ) ။
ဤဇယားကိုအခြေခံအကျဆုံးစျေးနှုန်းဇယားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း၎င်းသည်အသုံးမ ၀ င်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပတ်သက်။ လာသောအခါပိုကြီးတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဘို့အလွန်ကြီးစွာသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
သင်ကြည့်နေသောမည်သည့်အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ်တွင်မူတည်သည် (၎င်းသည်မိနစ်မှလများအထိဖြစ်နိုင်သည်)၊ သို့သော်အငြင်းအခုံအတွက်ကြောင့်သင်နေ့စဉ်ဇယားကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုဆိုပါစို့။ လိုင်းဇယားသည်ထိုအချိန်ကာလကုန်ဆုံးချိန်တွင်အနီးကပ်ဈေးနှုန်းများကိုစီစဉ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာနေ့ရဲ့အဆုံးမှာလိုင်းဟာအဲဒီနေ့ရဲ့နိဂုံးစျေးနှုန်းကိုဆက်သွယ်ပေးလိမ့်မယ်။
Forex - ဘယ်လိုကုန်သွယ်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ forex trading PDF အပိုင်းတွင်သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ၊ အပြင်ထွက်ကြည့်ရမည့်အရာများအကြောင်းပြောဆိုသွားမည်။
Forex trading နှင့် ပတ်သက်၍ စျေးနှုန်းများသည် 'bid' နှင့် 'ask' ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
လေလံစျေးဖြေ။ ။ ဒါကသင်ရောင်းတဲ့ငွေကို။
စျေးနှုန်းမေးပါဖြေ။ ။ ဒါကသင် ၀ ယ်နိုင်တဲ့ငွေပမာဏပါ
Forex trading နှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်တိုတိုနှင့်ကြာရှည်စွာရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ကုန်သွယ်မှုမစတင်မီ Forex trading ကိုကောင်းစွာနားလည်ကြောင်းသေချာစေပါ။ နောက်ဆုံးတွင် Forex trading သည်စတင်ရန်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးရှည် (၀ ယ်ယူရန်)
အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ရှည်ကြာတာဟာများသောအားဖြင့် ၀ ယ်တာကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်မည်ဟုမျှော်လင့်သောအခါသူတို့သည်ကြာရှည်သွားလိမ့်မည်။
ဥပမာ USD / JPY
ဆိုလိုသည်မှာ USD သည် JPY နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တန်ဖိုးပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်နေသည်
အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကို USD / JPY သို့ရှည်လျားသောအနေအထားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက၊ သင်သည်ပေါင် ၁၀၀၀ ကိုသာတန်ဖိုးတစ်ခုချင်းစီတန်ဖိုးမြှင့်လိမ့်မည်ဟုသင်လောင်းကြေးပေးခဲ့သည်။
Forex ကုန်သည်များကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏စျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောအခါတိုသွားလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၀ ယ်ယူခြင်းမှအနိမ့်ကျသောတန်ဖိုးဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်သင်ရောင်းရန်မှာထားရန်လိုအပ်သည်။
လက်ရှိငွေလဲလှယ်နှုန်းသည်စျေးကွက်အင်အားအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် USD ၁ ဒေါ်လာဖြင့် ၁၇ ZAR ကိုဖလှယ်ပါကသင်၏ Forex ပွဲစားမှကမ်းလှမ်းသောရောင်း ၀ ယ်စျေးနှုန်းသည်ထိုကိန်းဂဏန်း၏တစ်ဖက်တည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသိသာထင်ရှားသည့်ရောင်း ၀ ယ်မှုနှင့် ၀ ယ်လိုအားတို့ကို Forex ဈေးကွက်တွင်အများဆုံးငွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ တင်သွင်းသူများ၊ တင်ပို့သူများ၊ ဘဏ်များနှင့်ကုန်သည်များရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားကအနည်းငယ်ကိုဖော်ပြပါမည်။ ဤသည်မှာ Forex နယ်ပယ်တွင်ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိရာများကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။
အများဆုံးငွေကြေးငွေကြေးအတွဲထို့ကြောင့်ဝယ်လိုအားမြင့်မားသောသူဖြစ်ကြ၏။ ဥပမာအားဖြင့် GBP / USD သည်အလွန်များပြားသောကြောင့်ကာလတိုကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုကမ်းလှမ်းသည် pips တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်နေ့တိုင်း (ပျမ်းမျှအားဖြင့် 90-120) သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် AUD / NZD သည်တစ်နေ့လျှင် pips အမြောက်အများကိုမရွှေ့ရ။ သင်ပြောတာကအကယ်လို့သင်ဟာပိုပြီးထူးခြားတဲ့ငွေကြေးအချို့ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် - သင်ခန်းစာ ၂ ကုန်သွယ်ရေးမှာငါတို့ဟာလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
စဉ်းစားရန် Forex Trading စနစ်
သင်ကျဆင်းလာပြီးတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုသင်ခံစားရသောအခါ Forex trading system ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောပမာဏရှိပါသည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ သင်မှကောက်ယူဘို့။ အကြောင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဈေးကစားသူများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ဘဏ်များသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကုန်သွယ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Forex trading PDF ၏ဤအပိုင်းတွင်သင့်အားသင်ရရှိနိုင်သည့်နည်းဗျူဟာအချို့ကိုရှင်းပြပါမည်။
တစ်နေ့တွင်းကုန်သွယ်ရေး: တစ်နာရီသို့မဟုတ် ၄ နာရီဈေးနှုန်းများကိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ Forex intraday trading သည်ကုန်သွယ်ရေး၏ရှေးရိုးစွဲနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဦး ဆောင်အစည်းအဝေးများကိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ ဤအရောင်းအ ၀ ယ်များသည် ၁ နာရီမှ ၄ နာရီအကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီကလုပ်နိုင်ဘူး အစပြုသူအဘို့အသင့်လျော် option ကို.
ငွေကြေး ဉီးခေါင်းရေ: ဤအထူးသဖြင့်မဟာဗျူဟာကိုအနိမ့်ဆုံးကုန်သွယ်မှုပုံစံအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ၎င်းသည်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလအတွင်းငွေကြေးအတွဲများရောင်းခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းများကိုအဓိကထားသည်။ ဤသည်မှာများသောအားဖြင့်စက္ကန့်ပိုင်းအကြာနှင့်အများဆုံး ၂ နာရီမှ ၃ နာရီအကြား၌ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိရန်အလားအလာများစွာရှိသည်။
Swing ထရေးဒင်း: မကြာခဏအလယ်အလတ်ကာလချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည် ဦး ရေပြားနှင့်တစ်နေ့တာနှင့်မတူသည်မှာလွှဲကုန်သွယ်မှုသည်စျေးနှုန်းပိုမိုကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာဖြင့်ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုကိုရက်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များအထိပင်ဖွင့်ထားနိုင်သည်။ အချို့သောကုန်သည်များသည်လက်ရှိကုန်သွယ်ရေးကိုအလှဆင်ရန်ဤရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြုကြသည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ - ရှင်းပြသည်
သင်၏အိမ်မှသက်သောင့်သက်သာဖြစ်သော (သို့မဟုတ်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်) ငွေကြေးအတွဲများကို ၀ ယ်လိုလျှင်ရောင်းလိုလျှင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုသုံးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက Forex ပွဲစားအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းသည်အွန်လိုင်းအာကာသတွင်ရာနှင့်ချီသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများစာသားရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ပွဲစားနှင့်မည်ကဲ့သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုသိရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Trading PDF ၏အောက်ဖော်ပြပါကဏ္sectionsများတွင်သင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောအချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
သင်ရရှိနိုင်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာများကိုလည်းရှာဖွေသင့်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းထားနိုင်ပြီးအချို့မှာနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများ၊ တိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းဇယားများ၊ ဘဏ္marketာရေးဈေးကွက်မှလက်ရှိသတင်းများနှင့်အချက်အလက်များကိုရယူခြင်းသည် Forex trading ၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤနည်းပညာညွှန်းကိန်းများကိုသင်၏ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းအတွင်းသို့ ၀ င်ကြည့်ပါက၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ကြောင်းသက်သေပြလိမ့်မည်။ အကြောင်းကတော့၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များအကြားရွေ့လျားနေရခြင်းကိုသင့်အားခြေရာကောက်နိုင်သောအလုပ်များစွာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအချို့သည် MetaTrader5(MT5) နှင့် MetaTrader4()MT4) ။ MT4 ကိုအထူးသဖြင့် Forex ကုန်သည်များအတွက်ဖန်တီးသော်လည်း MT5 သည်ကုန်သည်များအား CFDs များကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပေးသည် (CFD များအတွက်မူဤ forex trading PDF တွင် 'အသုံးများသောကုန်သွယ်ရေးဝေါဟာရများ' အောက်တွင်ရှင်းပြချက်ကိုကြည့်ပါ) ။
အရေးကြီးသည်မှာ MT4 နှင့် MT5 နှစ်ခုစလုံးသည်လျင်မြန်။ လက်ခံနိုင်သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးတိုက်ရိုက်စျေးကွက်အချက်အလက်များနှင့်ခေတ်မီဇယားများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ Forex ပွဲစားအတွက်ယုံကြည်မှု
သင်အလေးအနက်အရောင်းအဝယ်မစတင်မီသင်အသုံးပြုလိုသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုသင်အပြည့်အဝယုံကြည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ၊ သင်သည် ဦး ရေပြားမဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားပါကအထူးသဖြင့်ကိစ္စဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင်၊ သင်ကုန်သွယ်လိုပါကသင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်သင်၏ငွေရေးကြေးရေးအတွက်အချက်အလက်များလွှဲပြောင်းမှုလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သင်အပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ဤသည်မှာစျေးနှုန်းအတိအကျနှင့်အော်ဒါအပြောင်းအလဲမြန်ဆန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်သင့်အားအောင်မြင်သော Forex trading အတွေ့အကြုံရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင့်အားအခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်စေရန်အတွက်၊ Forex စျေးကွက်ဖွင့်ချိန်နှင့်အညီ၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ကိုအကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
သင်၏ပွဲစားသည်သင့်အတွက်လုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုခြင်းမှသင့်အားကယ်တင်ရန်သင်၏ Forex ပွဲစားသည်သင့်အကောင့်နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုသီးခြားစီမံရန်သင့်အားခွင့်ပြုသင့်သည်။
သင်၏ Forex ပွဲစားသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေများကိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်အရန်ကူးရန်သေချာစေမည့်နာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။
သီးခြားခွဲခြားမှုကို Forex ပွဲစားများကြားတွင်မကြာခဏအသုံးပြုပြီးသင်၏ရန်ပုံငွေကိုကုမ္ပဏီ၏ရန်ပုံငွေများ (ဥပမာ - သူတို့၏နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အကြွေးများနှင့်လည်ပတ်မှုစရိတ်များ) ကိုခွဲခြားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Forex ပွဲစားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ပိုက်ဆံကလုံခြုံပြီးခွဲခြားထားတယ်။
သင်တစ် ဦး Forex ပွဲစားကဒီလိုလုပ်ဖို့မတတ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိလျှင်, ငါတို့သည်ယနေ့ခေတ်စံအလေ့အကျင့်ဖြစ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောပွဲစားကိုရှာဖွေအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ဤ Forex trading PDF အဆုံးပိုင်းတွင်စာရင်းဝင်သည့်ပွဲစားများအားလုံးသည်အနည်းဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောလိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှသတ်မှတ်သည်။
Forex Trading - စတင်ခြင်း
အွန်လိုင်း Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သည့်ပွဲစားကို ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ အောက်တွင်သင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မည့်အဆင့်အချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုသင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပွဲစားမှတောင်းဆိုသောစံအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သင်၏အမည်၊ လူနေအိမ်လိပ်စာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ - ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ
Forex ပွဲစားများသည်သင့်အားကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံအချို့ရှိစေရန်မကြာခဏလိုချင်လိမ့်မည် (သို့သော်ဤသည်မှာအမြဲမဟုတ်ပါ) ။ ဤဥပမာအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်စရာမေးခွန်းအချို့ကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်
အဆင့် 3: သင်၏အထောက်အထားအတည်ပြု
ဤလုပ်ငန်းကို KYC ဟုလူသိများသည် (သင်၏ဝယ်သူအားသိရှိပါ) ၎င်းသည် forex ပွဲစားသည်သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အချို့ပွဲစားများသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသည့်စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများကို အသုံးပြု၍ ယင်းကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစိုးရမှထုတ်ပြန်ထားသော ID (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) နှင့်လိပ်စာအထောက်အထား (အသုံးအဆောင်ဥပဒေကြမ်းသို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်) ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၄ - ငွေသွင်းခြင်း
သင်၏ငွေပေးချေမှုပုံစံကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည် (များသောအားဖြင့် drop-down စာရင်းမှ) သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ထဲသို့မည်မျှကြာအောင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ငွေသားများကိုမခွဲမခွာစစ်ဆေးပါ။
ပံ့ပိုးပေးသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်တို့ပါ ၀ င်သည်။ အချို့ပွဲစားများသည် Paypal နှင့် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallets များကိုပင်ထောက်ပံ့ကြသည်။
အဆင့် ၅ - အရောင်းအဝယ်စတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex trading PDF ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်သင် စတင်၍ ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုရှိသင့်သည်။ သို့သော်၊ သင်အမြဲတမ်းအခမဲ့ Forex Trading သရုပ်ပြကိုအရင်စမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးကိုမစွန့်စားခင်သင်၏အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသောကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Forex Trading ၏မဟာဗျူဟာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex trading PDF ၏နောက်အပိုင်းတွင်၊ ပို၍ အရေးကြီးသောနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအသုံးပြုသောစျေးကွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။
Richard Donchian မှပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သော donchian လိုင်းများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းအတာအရသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကရက် ၃၀ ခွဲခြားမှုကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ပါကဥပမာအနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးကာလကိုယူခြင်းဖြင့်ဤညွှန်ပြချက်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည် (ဤဥပမာတွင်ကာလ ၃၀) ။
ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှအား Donchian channel တွင်ကြည့်သောအခါ ၂၅ ရက်မှနောက်ဆုံး ၃၀၀ ရက်အထိပျမ်းမျှကြည့်နိုင်သည်။ ခွင့်ပြုသည့် ဦး တည်ချက်သည်ရေတိုရွေ့လျားမှုပျမ်းမျှညွှန်ကြားချက်၏အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်ဖော်ပြပါရာထူးနှစ်ခုအနက်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်သင်စဉ်းစားသင့်သည် -
ရှည်လျားသော - အကယ်၍ tသူသည်ရက် ၃၀၀ ရွေ့လျားပျမ်းမျှအား ၂၅ ရက်ရွေ့လျားပျမ်းမျှထက်နိမ့်သည်။
တိုတောင်းသော - If tသူသည်ရက် ၃၀၀ ရွေ့လျားပျမ်းမျှအား ၂၅ ရက်ရွေ့လျားပျှမ်းမျှထက်သာလွန်သည်။
သင်သည်ရှည်လျားသောအနေအထားကိုဖွင့်လျှင် (သင်၏အပြန်အလှန်အားဖြင့်) သင်၏ကုန်စုံကိုရောင်းရန်ကုန်သည်ကိုရောင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဤသည်အခြားအသုံးအများဆုံး forex ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရွေ့လျားပျမ်းမျှအား (SMA ခေါ်) သည်လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်ဈေးထက် (နှေးကွေးသောအညွှန်းကိန်း) ထက်နှေးကွေးသောနှုန်းဖြင့်လည်ပတ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းအရစျေးနှုန်းအချက်အလက်များစွာကိုအသုံးပြုသည်။ တကယ်တော့ပိုပြီးဒီတော့အများဆုံးအခြားနည်းဗျူဟာများထက်။
ဆန့်ကျင်ဘက်မြင်ကွင်းတွင်ရေရှည်ရွေ့လျားမှုပျှမ်းမျှသည်ကာလတိုရွေ့လျားမှုပျမ်းမျှထက်မြင့်မားပါကဤအချက်သည်အောက်ဘက်လမ်းကြောင်းမှရောင်းအားအချက်ပြမှုကိုညွှန်ပြသည်။ ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှအားများသောအားဖြင့် Forex trading အချက်များထက်အလုံးစုံလမ်းကြောင်း၏သက်သေအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှအကြံပြုချက်၏အထွေထွေလမ်းကြောင်းနှင့်မကိုက်ညီသော breakout အချက်ပြများကိုနုတ်ရန်သင်မဟာဗျူဟာနှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကမင်းရဲ့ breakout အချက်ပြတွေကိုပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ရောင်းသောအချက်ပြမှုကိုသတိပေးပါကရေတိုရွေ့လျားမှုပျှမ်းမျှသည်ရေရှည်ရွေ့လျားပျမ်းမျှပျမ်းမျှနှုန်းထက်လျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြသည်။
သို့သော် အကယ်၍ သင့်အား ၀ ယ်ရန်အချက်ပြတစ်ခုပေးလျှင်၊ ဤသည်များသောအားဖြင့်ရေတိုရွေ့လျားမှုသည်ရေရှည်ရွေ့လျားပျမ်းမျှပျမ်းမျှနှုန်းထက်များနေသည်။
အားလပ်ချိန်များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်အချက်အလက်များအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်ရေရှည်မဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် 'စုစည်းခြင်း' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသောစျေးကွက်များသည်ခုခံနိုင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုချည်နှောင်ခြင်းတို့အကြားတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကွဲပြားသည်။ စျေးကွက်သည်ဤစုစည်းမှုကန့်သတ်ချက်များထက်ပိုမိုသောစျေးကွက်သို့သွားသောအခါအငြင်းပွားမှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပေါ်သည် - ၎င်းသည်နိမ့်သည်ဖြစ်စေမြင့်မားသည်ဖြစ်စေ၊ ထို့ကြောင့်လမ်းကြောင်းသစ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ breakout ကိုပြုလုပ်ရမည်။
အားလပ်ချိန်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုစတင်နေပြီ၊ မစတင်သည်ကိုသင်ကောင်းကောင်းညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်၊ လမ်းကြောင်းအသစ်ကိုအချက်ပြရာတွင် breakout သည် ၁၀၀% တိကျသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်သိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရန် stop-loss order ကိုအသုံးပြုလိုပေမည်။
Forex အရောင်းအဝယ်: ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်များ
Forex trading တွင်အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကဲ့သို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုရှိသကဲ့သို့သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အန္တရာယ်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Trading PDF ၏အောက်ဖော်ပြပါကဏ္sectionsများတွင်ဤဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာသည်။
ငွေပေးငွေယူအန္တရာယ်သည်ငွေလဲနှုန်းနှင့်အချိန်ဇုန်ကွာခြားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကန်ထရိုက်စာချုပ်တစ်ခု၏အစနှင့်အဆုံးအကြားတစ်ချိန်ချိန်တွင်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်အတူတူပင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းများကြားတွင်အချိန်များများရလေလေ၊
သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာငွေကြေးနှုန်းမြင့်တက်လာသောအခါသက်ဆိုင်ရာငွေကြေးသည်ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဟုအခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။ ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့ပြန်လာပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ငွေကြေးများနှင့်ထိတွေ့လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏သြဇာများလေလေ၊ သင်၏ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်များလေလေဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီသြဇာသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအပြုသဘောသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
2021 ၏အကောင်းဆုံး Forex Trading ပွဲစားများ
Forex trading PDF ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းသည်မည်သည့်ပွဲစားများသည်လေ့လာသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များနှင့်ရေပန်းစားသည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Forex Trading ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီကိုကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့သည်အလေးမထားဆုံးကိုသေချာစွာယုံကြည်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည်၊ Forex အတွဲများစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်၊ ကော်မရှင်နှင့်အခကြေးငွေနည်းပြီးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာကိုထောက်ပံ့သည်။
၄။ AVATrade - ၂ ဒေါ်လာမှ ၂၀၀ ဒေါ်လာသာအပိုဆုကြေး
AVATrade သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများကိုကမ်းလှမ်းသောတည်ထောင်သူပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ စတော့အိတ်များ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ကုန်စည်များနှင့် cryptocurrencies (CFDs များမှတစ်ဆင့်) ၏ထိပ်တွင်သင်သည် Forex အတွဲများစွာကိုလဲကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ငွေပေးချေရန်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မရှိ၊ ပြန့်ပွားမှုသည်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
AvaTrade ဝဘ်ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ လူကြိုက်များသောတတိယပါတီပံ့ပိုးသူ MT4 မှသော်လည်းကောင်းသင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေများသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ သင် debit / credit ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။ လိုင်စင်အများအပြားကို၎င်း၏ခါးပတ်အောက်တွင်ရှိသည်။
FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB တို့က ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex trading PDF မှတစ်ဆင့်၎င်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးသောအခါသင်သည်ယခုအခါနည်းပညာဆန်းစစ်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးများကိုလမ်းညွှန်ပေးသောမက်ခရိုစီးပွားရေးအခြေခံများကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသင့်သည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်ပါ ၀ င်သောအသုံး ၀ င်သည့်အချက်အလက်များအားလုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်ထွက်ခွာ။ Forex trading စတင်ရန်အသင့်ဖြစ်သင့်သည်။ အမြတ်အစွန်းရအောင်နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
သငျသညျအနည်းငယ်ကန့်သတ်ရန်ပုံငွေများနှင့်အတူကုန်သည်ဖြစ်လျှင်, သင်လွှဲအရောင်းအဝယ်ဆုံးသင်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြေခံကျသောကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း wသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းမပြုမီဖြစ်နိုင်သမျှသောအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်အကြံပြုပါသည်။ ငါတို့ကဲ့သို့သောအထောက်အကူပြုလမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်ယူခြင်းကသင့်အား၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်သင်မည်သို့ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိစေပါလိမ့်မည်။
Forex ဝေါဟာရကို 'နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု' ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပိုမိုတိကျစွာပြောရလျှင် GBP / USD နှင့် USD / ZAR တို့ကဲ့သို့သောငွေကြေးအတွဲများအား ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
သင်ဘယ်လို Forex အတွက်ငွေရှာသလဲ?
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေတွေနှစ်ခုအတွက်ငွေရှာပါလိမ့်မယ်။ သင်က (အနည်းဆုံးအမှာစာ) အတွက်သင်ရောင်းသောထက်နည်းသောငွေကြေးအတွဲကိုသင်ဝယ်ယူပြီးသင်ဝယ်သောထက် (အနည်းဆုံးအမှာယူ) အတွက်ငွေကြေးအတွဲကိုသင်ဝယ်သည်။
ပြန့်ပွားခြင်းသည်လေလံဆွဲခြင်းနှင့် Forex စုံတွဲ၏ဈေးနှုန်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းဤကွာဟမှုကိုသင်၏အမြတ်နှင့်အရှုံးခန့်မှန်းချက်များတွင်ထည့်သွင်းထားရမည်, ပွဲစားကပလက်ဖောင်းအမြဲငွေရှာကြောင်းသေချာသည်။
၎င်းသည်သင်ရောင်းဝယ်သောကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ သငျသညျ EUR / USD ကိုကဲ့သို့မြင့်မားသောအရည်အထူးများကုန်သွယ်လျှင်, သင်တစ် ဦး ထက်ပို pip ကိုပေးဆောင်မဖြစ်သင့်။
ပိုက်သည်ဒdecimalမစုံတစ်ခု၏ရွေ့လျားမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာ GBP / USD ကို ၁.၂၄၅၀ နဲ့ ၁.၂၄၅၁ ကိုရွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါက 1.2450 pip of movement ဖြစ်တယ်။
၎င်းသည်သင်၏တည်နေရာ၊ ငွေကြေးအတွဲနှင့်ပွဲစားသူစသည့်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကိစ္စရပ်အများစု၌ယူကေနှင့်ဥရောပမှကုန်သည်များသည်အဓိကအတွဲများ၌ ၁:၃၀ နှင့်အသေးစားနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများအပေါ် ၁:၂၀ ကိုသြဇာသက်ရောက်သည်။
Slippage ဆိုသည်မှာသင်၏ Forex Order သည်သင်တောင်းသောစျေးနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောဈေးနှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
2021 ခုနှစ်၏ အခမဲ့ Forex Signals Telegram အဖွဲ့များ